समाचार - बाँस अलंकार हेरचाह – सफाई र मर्मत सम्बन्धी सल्लाह
बाँस एक कडा प्रकारको घाँस हो जुन अत्यन्तै कडा छत र डेकिंग बोर्डहरू बनाउनका लागि उपयुक्त छ। बाँस डेकले तपाइँको बगैचालाई एक प्राकृतिक र सुन्दर देखिन्छ। आउटडोर भारी बाँस फ्लोरिंगले उत्तम बाँस सामग्री प्रयोग गर्दछ, र स्ट्रिक प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी मार्फत बनेको हुन्छ। भारी बाँस भुइँ गैर-विषाक्त, गन्ध रहित, फर्म र स्थिर, र कीराहरू प्रतिरोधी छ। यो बाहिरी स्थलहरूको लागि उत्तम विकल्प हो, जस्तै पार्कहरू, समुदायहरू, वर्गहरू, आदि।
यद्यपि बाहिरी बाँसको फर्शिंग समयसँगै फोहोर र खैरो बन्न सक्छ। उचित सफा र मर्मत सम्भव डेक जति सक्दो सुन्दर राख्न महत्वपूर्ण छ।
१. मर्मत गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले डेकिंग बोर्डहरूलाई असर गर्दछ, जस्तै पातहरू, परागकण, शीत, वर्षा वा सूर्यको प्रकाश। विभिन्न ठाउँहरूमा फरक मौसम अवस्थाको बाँस बोर्डहरूको उपस्थितिमा धेरै प्रभावहरू हुन्छन्। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, डेकिंग बोर्डहरू फोहोर हुनेछन्, रंग फिक्का हुनेछ र घुमाउरो र क्र्याकहरू पाउन सक्छन्। त्यसोभए तपाईंको डेकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि केहि मर्मत-सम्भार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
२. मर्मत कसरी गर्ने?
बाँस डेकिंग बोर्ड, उष्णकटिबंधीय हार्डवुड डेकिंग जस्तै, यसलाई पानी-बेस तेल (जस्तै Woca तेल) संग वर्षमा कम्तिमा एक पटक राख्नु आवश्यक छ। REBO सुझाव दिन्छ तपाईं सजिलैसँग डेकिंग बोर्डको स्थापना पछि केहि सफा र सजिलो मर्मत गर्नुहोस्, केही स्क्र्याचहरू स्थापनाको समयमा बनाइनेछ।
यहाँ सन्दर्भका लागि केहि सुझावहरू छन्:
सबैभन्दा पहिले, तपाईंले बोर्डहरू सफा गर्न केहि उपयुक्त उपकरणहरू छनौट गर्नुपर्नेछ।
१) डेकिंग बोर्ड सफा गर्नुहोस्: यसलाई पानीले धुनुहोस् वा विशेष क्लीनरको प्रयोग गरेर मुसेडिन र फोहोरबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्रशले सफा गर्नुहोस्।
२) निश्चित गर्नुहोस् कि डेकिंग बोर्डहरू प्राकृतिक रूपले सुख्खा हुन्छन् र बाहिरी पानीमा आधारित तेल प्रयोग गर्दछन्।
)) तेल प्राकृतिक रूपमा सुक्खा नभएसम्म संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुहोस्।
यहाँ REBO M-श्रृंखला (मध्यम कार्बनयुक्त) र D-श्रृंखला (गहिरो कार्बनयुक्त) को रंग विरोधाभास छ।
आउटडोर भारी बाँसको काठ फर्शको नियमित मर्मतले भुइँ बिछाउनेको समग्र प्रभावलाई कायम राख्न सक्छ, र यसलाई कायम राख्न गाह्रो छैन। त्यसोभए यदि तपाईं आफ्नो डेक पहिले जस्तै सुन्दर देखिनुहुन्छ भने, मर्मत धेरै आवश्यक छ। यो तपाईको लागि सजिलो काम हो, हैन? अधिक जानकारी को लागी, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।